Banyere Anyị - Hebei Neweast Yilong Trading Co., Ltd.
Tọrọ ntọala na 2006, Hebei Neweast Yilong Trading Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ nkeonwe nwere nde mmadụ iri nke dị na Shijiazhuang obodo, mpaghara Hebei, China.
Hebei Neweast Yilong bụ ụlọ ọrụ na-eto eto na-aga n'ihu na-eto eto ma na-agbasawanye.
N'afọ 2021, anyị butere ahịa nde dollar 38, nke bụ nnukwu elu kemgbe ntọala anyị.
Anyị nwere ndị ọrụ 25 ugbu a bụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ azụmaahịa sonyeere ezinụlọ anyị.
Ndị ọrụ anyị niile nke Hebei Neweast Yilong dị njikere ime ihe kacha mma iji gboo ihe ị chọrọ.
Imekọ ihe ọnụ dị ebe a, anyị ga-abụ nhọrọ kacha mma.
Ihe Anyị Pụrụ Ime
Anyị isi ngwaahịa niile ụdị waya, waya ntupu, ubi nsu, nsu post, ubi ọnụ ụzọ ámá, osisi njide na trellis, ntu, okporo osisi arịlịka, ehi nsu, Pita onu, wdg Ọtụtụ n'ime anyị ngwaahịa na-ebupụ na Europe, America. Ọstrelia, Russia, Japan, na ndị ọzọ.
Site na ngwaike dị iche iche na ngwaahịa ubi enyere, anyị nwere otu ụlọ ọrụ nwere ụlọ ọrụ, otu ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na ihe karịrị ụlọ ọrụ ọkachamara 20 na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gboo mkpa ndị ahịa anyị, ụfọdụ n'ime ha agafeela BSCI.
Anyị na-ewere àgwà dị ka ihe kacha anyị mkpa.Iji nweta njikwa kacha mma, anyị na-emepụta otu ndị na-ahụ maka nyocha ngwaahịa n'oge usoro ihe niile site na nrụpụta ruo n'ịkwanye akpa, ibutu, na njem.
Ọzọkwa, Hebei Neweast Yilong Trading Co., Ltd na-etinye aka na nyocha ngwaahịa na ihe ọhụrụ.Ugbu a, anyị nwere patent atọ na ngwa ngwaahịa ma anyị na-edobe ụzọ, na-enyocha na imelite, iji nye ngwaahịa ndị ka mma.
Akụkọ mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ
Tọrọ ntọala na 2006, Hebei Neweast Yilong Trading co., Ltd.bụ ụlọ ọrụ nkeonwe nwere kpam kpam nke nwere isi obodo ndebanye aha nde iri.Na 2015, anyị nwetara akwụkwọ nzere AEO.N'afọ 2021, anyị butere ahịa nde dollar 38, nke bụ nnukwu elu kemgbe ntọala anyị.
Ntọala nke Mr. Xun mbupụ ego bụ $ 800, anyị nwere ndị ọrụ 7.
Mee ụlọ mmepụta ihe nke anyị
Ọnụ ego mbupụ bụ $1200, enwere ndị ọrụ 12 ngwaahịa anyị na-abawanye.
Anyị nwetara asambodo AEO
Ọnụ ego mbupu ruru $1800
Enwere ndị ọrụ 16 na otu anyị
A na-enye anyị dị ka ndị ahịa AA site na Sinosure
Anyị enwetala patent 8
Tinye ego na-ewu ụlọ mmepụta ihe ọhụrụ
Ọnụ ego mbupụ ruru $3800
Ndị otu anyị siri ike karị wee rute mmadụ iri abụọ na ise
Anyị enwetala patent iri na abụọ kpamkpam
Bracket, Ọnụ ụzọ ámá efere e ji achọ mma, Austrịa Y Post, Ọnụ ụzọ ámá ọkọlọtọ, Ihe ndozi Ugboro abụọ Waya Panel Mkpuchi ntụ ntụ, 3d welded Panel nsu,